असोज १६, २०७५ | मकवानपुर
वडाअध्यक्ष, बागमति गाउँपालिका वडा नं. २, मकवानपुर
तपाईंको वडाले सडक पूर्वाधारलाई मात्र महत्व दिएको देखियो नि ?
बाहिरबाट हेर्दा यस्तो देखिनु स्वभाविक नै हो । वडाको पहिलो प्राथमिकता नै यातायात सुविधा उपलब्ध गराउनु थियो । त्यसको लागि सडक आवश्यक हुने नै भयो । अरु वडा र गाउँपालिकाले झैं हामीले अघिल्लो वर्ष सडक पूर्वाधारलाई नै विशेष योजना बनाएका हौं । हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा क्यान्टिन राई गाउँसडक, गोटे राम सडक, ठूलदमार टोल सडक, शाखाटार सडकको ट्रयाक खन्ने काम गर्यौं । यसवर्ष त्यसको स्तरउन्नतिका लागि बजेट छुट्याएका छौं । यसले गर्दा सडकमा मात्र वडाको ध्यान केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको हो तर त्यसो होइन । अघिल्लो वर्ष हामीले वडाको खानेपानी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएर काम गर्यौं । प्राविधक समस्याका कारण समयमै नसकेको हुनाले यो योजनालाई क्रमागत योजनामा राखेर यसपाली पनि बजेट छुट्याएका छौं । यसका साथै हामीले स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयको गुणस्तरबृद्धि, खेलकुद मैदान र पर्यटन विकासलाई बजेट छुट्याएका छौं । ।
विद्यालयको गुणस्तर बृद्धिको योजना चाँहि कस्तो बनाउनु भएको छ ?
मेरो गाउँपालिकामा बागमति मावि पर्छ । यसमा प्लस टु सम्मको पढाई चलिरहेको छ । यसका अलावा सातवटा आधारभूत विद्यालयहरु छन् । माविमा ६०६ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् भने अन्य विद्यालयहरुमा १५० देख २०० जनाको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु रहेका छन् । अरु गाउँपालिका र वडाहरुले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउनको निम्ति विभिन्न योजनाहरु ल्याएको देखिन्छ । हामीले पनि विज्ञहरुको टोली बनाएर यसबारे छलफल चलाउँदै छौं । विद्यालयमा खेलमैदानको निर्माण गर्ने, खेलकुद सामग्रीको उपलब्ध गराउने, खाजा-पोशाकको व्यवस्था गर्ने वा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरुलाई जोड दिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । यो वडा तामाङ बाहुल्य क्षेत्र र साथमा देवास राई लगायत अन्य जातजातिको पनि बसोबास छन् । यस्तो बसोबासको क्षेत्रमा बहुभाषी शिक्षाको माध्यमबाट गुणस्तर शिक्षा दिन सकिन्छ कि भन्ने पनि छ । कतिपय गाउँपालिकाहरुले अंग्रेजी माध्यमलाई जोड दिएका कारण अभिभावकहरुको मनसाय त्यतातिर पनि ढल्केको पाउँछु । यसबारे छिट्टै निस्कर्षमा पुगिने छ भन्ने लागेको छ । हामीले अर्को के गरेका छौं भने गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरु र यसभित्र कार्यरत कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना बालबच्चाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने नियम बनाएका छौं । अन्यथा कारबाही गर्ने निर्णय गरेका छौं । यसबाट पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । यसपटक हामीले आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन बागमति माविको लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं ।
तपाईंको वडा त कृषियोग्य क्षेत्र हो । तर पनि कृषिप्रति विशेष ध्यान गएको देखिएन नि ?
तपाईंले ठीक प्रश्न उठाउनु भयो । हाम्रो वडालाई जम्मा ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस बजेटबाट नै सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, तटबन्धन, खेलकुद, जागरणमुखी तालिम आदिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रमा अझै कृषिलाई नगदे बाली बनाउन सकेको छैन । बजारको अभावका कारण पनि यसो भएको हो । कृषिमा सिंचाईको व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ । हामीसँग अहिले यति धेरै बजेट छैन । यसकारण कृषिलाई सम्बोधन हुन नसकेको हो । मैले गाउँपालिकामा कृषिको लागि बजेट माग गरेको छु । गाउँपालिकाले यस पटक १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यति रकम भनेको कृषकलाई तालिम दिने, बिउजिन वितरण गर्ने जस्ता सामान्य कामको लागि मात्र हुन्छ । टनेल बनाउन, बोरिङ खन्न र अनुदान दिन सम्भव हुँदैन । अबका आर्थिक वर्षमा कृषिमुखी बजेट बनाउने योजना छ ।
तपाईंले अघि स्वास्थ्य र पर्यटनको कुरा उठाउनु भयो । यसको लागि के कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
यो वडामा पहिलादेखि नै स्वास्थ्यचौकी थियो । अहिले यहाँ बर्थिङ सेन्टर सुरु भइसकेको छ । सरकारबाट निःशुल्क वितरण हुँदै आएको औषधीका साथै हामीले प्रेसर र सुगरको औषधी पनि निःशुल्क वितरण गरिरहेका छौं । कर्मचारीहरु चुस्तदुरुस्त राखेका छौं । तर, यहाँ उपचार हुन नसक्ने विरामीहरुलाई बाहिर लैजान सुविधा उपलब्ध गराउन एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन भने गर्न सकेका छैनौं । छिट्टै यो सुविधा पनि उपलब्ध गराउने तयारीमा लागिरहेको छु ।
यसैगरी यो ठाउँमा पर्यटन विकासको प्रल संभावना रहेको छ । यसकारण मैले गाउँपालिकाको बैठकहरुमा कुरा उठाउने गरेको छु । रौतहटको सिमानासँग जोडिएको यस वडाको डोटे भन्ने ठाउँ पर्यटकीय स्थलको लागि एकदमै उचित ठाउँ हो । पर्यटकीय पुर्वाधार बनाउन सक्यौं भने यसबाट गाउँपालिकालाई आर्थिक समृद्धिको लागि एउटा राम्रो आधार नै बन्न सक्छ । यसको लागि कार्ययेजना बनाएका छौं गाउँपालिकाबाट पास भएको छैन । आउदो आर्थिक वर्षमा रकम छुट्याउन दबाब दिइरहेका छौं ।
यस बाहेक अन्य योजनाहरु के के बनाउनु भएको छ ?
हामीले यस वडामा भेला हुने, छलफल गर्ने तथा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर वडापालिका स्टेस बनाउँदै छौं । यसको लागि ५ लाख रुपैयाँ पनि छुट्याइसकेका छौं । यस्तै गरी पिकनिक स्पोर्ट निर्माणको लागि ८ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छौं । हाम्रो यो वडा खहरेहरुबाट प्रभावित क्षेत्र पनि हो । खोला र खहरे नियन्त्रण गर्न नसक्दा वर्षेनी खेतियोग्य जमिनको कटानमा भइरहेको छ । यसको रोकथामको लागि तारजाली लाउने, बोट विरुवा रोप्ने जस्ता कामहरुलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं । प्रदेश सरकारले पनि यसको नियान्त्रणको लागि यसपटक ९९ सय लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो पर्याप्त रकम त होइन । तर अरुबेला भन्दा अलि बढी राहत मिल्ने आशा गरेका छौं । मरिण गाउँपालिकामा चरिचरन बन्द गर्ने खबर सुनेका छौं । त्यहाँ प्रभावकारी देखियो भने हामी पनि यो मोडलबारे छलफल गर्ने सोंचमा छौं ।
अघि भनेझैं यहाँ तामाङका अलावा राई लगायत अन्य जातजाति छन् । उनीहरुको मौलिक संस्कृतिहरु लोप हुने क्रम तीब्र गतिमा छ । यसलाई रोक्न उनीहरुको मौलिक पर्व, संस्कृति तथा भाषा जोगाउन र त्यसलाई प्रबद्र्धन गर्न वडाले योजना बनाईरहेका छौं ।
तपाईं र गाउँपालिका प्रमुख त विपरित पार्टीको हुनुहुन्छ । तपाईंले सोचेका यी कामहरु गर्न कतिको सहजता भइरहेको छ ?
चुनावको बेला फरक राजनीतिक धारबाट जितियो होला, अहिले त जनताको प्रतिनिधि हौं । यसकारण यहाँ मेरो तेरो भावना चल्दैन । हामीले राजनैतिक स्वार्थ नराखी चुनावका बेला जनतासँग गाउँ विकासको लागि जुन बाचा गरेका थियौं, त्यसअनुरुप काम गरिरहेका छौं । यसकारण असहज भएको छैन । विकासका निम्ति वडामा भएको समस्याहरुको गाउँपालिकाले सम्बोधन गर्न कुनै कन्जुस्याई गरेको छैन । बरु अघिल्ला दिनहरुमा कर्मचारीहरु आफ्नै ढंगले काम गर्न खोज्दथे, अहिले त यो समस्या पनि छैन । सबैबीच नङ-मासुको सम्बन्ध रहेको छ ।
प्रस्तुति: यकिना अगाध